सैनामैनामा ७० जनालाई लगाइयो रेबिज विरुद्धको खोप
रेडियो टाइम्स शनिबार, कात्तिक १३, २०७८, १९:००:००
कार्तिक १३, सैनामैना ।
रुपन्देहीको सैनामैनामा बिरामी परेको भैंसीको मासु खाँदा गाउँ नै त्रसित भएको छ । नगरको वडा नं. ७ देउवापारस्थित स्मृति टोलमा कुकुरले टोकेर बिरामी परेको भैंसीको मासु काटेर खाँदा गाउँ नै त्रसित भएको हो । यहि असोज १९ गते घटस्थापनाका दिन सैनामैना–८ पिपलडाँडा ठूलीओकाली निवासी एक स्थानीयको घरबाट स्मृतिटोलका केही व्यक्ति मिलेर भैंसी ल्याई काटेर गाउँमा मासु बिक्री गरेका थिए । असोज १९ गतेको घटना भएपनि अहिले आएर मात्र उक्त घटना सार्वजनिक भएको हो ।
वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष डिलाराम बेल्बासेका अनुसार घटस्थापनाका दिन स्मृतिटोल निवासी दुई व्यक्तिले पिपलडाँडाबाट भैसी ल्याई काटेर प्रति केजी २५० रुपैयाका दरले बिक्री गरेका थिए । उक्त भैंसीको मासु स्मृति टोल सँगै सैनामैना ८ र कञ्चन गाउँपालिका वडा नं. १ का गरि कूल १ सय ४० जनाले पकाएर खाएका थिए । वडाध्यक्ष बेल्वासेले भन्नुभयो –“ भैसी कुकुरले टोकेर केहीदिनदेखि बिरामी परेको रहेछ, उहाँहरुले हामीले छाला मात्र प्रयोग गर्छौ भनि उक्त भैंसी मालिकको घरबाट ल्याउनुभएछ र गाउँमा काटेर बिक्री गर्नुभएको रहेछ । ” बेल्वासेले उक्त मासु खानेमा बच्चादेखि बृद्ध उमेर समूहका छन् भने भने मासु काट्नेमा वयस्क उमेर समूहका रहेको बताउनुभयो । अस्वस्थ मासु बिक्री वितरण गरेको हुनाले उनीहरुलाई आवश्यक कार्बाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय सालझण्डीलाई अनुरोध गरिसकेको वडाध्यक्ष बेलबासेको भनाई छ । ।
कुकुरले टोकेर बिरामी परेको भैंसीको मासु काटेको घटना हाल सार्वजनिक भएपछि भने सैनामैना नगरपालिकाले स्मृतिटोलमा पुगेर एकैपटक ७० जनालाई रेबिज विरुद्धको खोप लगाएको छ । नगर प्रमुख चित्र बहादुर कार्कीले अझै पनि गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारमा स्वास्थ्र्यवद्र्धक खाद्यन्न सम्वन्धि चेतनाको अभाव रहेकोले उक्त समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो –“ घटस्थापनाका दिन सस्तो मासु पाएपछि स्थानीयले बिरामी भैंसीको मासु किनेर खानुभएको रहेछ । तर, हाल मात्र यसबारे नगरपालिकामा खबर भयो ।” खबरपश्चात नगरपालिकाले तत्कालै लुम्बिनी प्रदेश सरकार र संघीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा खोपको पहल गरि लगाउनै पर्ने ७० जनालाई खोप लगाउन सफल भएको प्रमुख कार्कीको भनाई छ । उहाँले ठूलो सङ्क्रमक रोगबाट जोगिन सफल भएको बताउँदै चाडपर्व सँगै अन्य समयमा पनि मासुजन्य खाद्यन्न खाँदा स्वास्थ्यवद्र्धक खान सम्पूर्णमा आग्रह गर्नुभयो ।
नगर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हेमराज पन्थीका अनुसार असोज ११ गते विहीवार स्मृतिटोलमा नगरको स्वास्थ्य शाखा सहितकोे टोली पुगेर खोप लगाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कूल १ सय ४० जना मध्ये मासु काटेका र नपाकेको मासु छोएका ७० जनालाई पहिलो खोप दिइएको हो । रेबिज विरुद्धको खोप तीन पटक सम्म लगाउनुपर्दछ ।
यता मासु ल्याएर बिक्री गर्ने हरि सुनार ( नाम परिवर्तन ) ले भने भैंसी ल्याएर काटेर बिक्री गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनले भने – “बिरामी भैंसी थाहा थियो, तर कुकुरले टोकेको भन्ने थाहा थिएन, मेरो गल्ती भयो, कार्बाही गरे स्वीकार गर्न तयार छु ।”
चाडपर्वको समयमा स्थानीय स्तरमा भैंसीको मासु सस्तोमा पाइएपछि आफुहरुले किनेर खाएको स्थानीयको भनाई छ । एक स्थानीय किशोरले रेडियो मलमलाको सँगको कुराकानीमा आफुले एक बिलोको रु.२५० मा ल्याई पकाएर खाएको बताए । उनले बिरामी भैंसीको मासु खाएको भन्ने थाहा भएपछि डर लागेको बताउँदै घटना भएपश्चात भने नगरपालिकाले तत्काल खोप व्यवस्थान गरेर स्थानीय सबैलाई उपलब्ध गराएकोमा खुसी व्यक्त गरे । यस घटनाप्रति स्थानीय जनप्रतिनीधिले खेलेको भूमिका प्रति आभार व्यक्त गरे ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले खोप लगाउन जान समेत समस्या भएका बेला नगरपालिकाले पहल गरि खोपको व्यवस्था गरिदिएकोमा स्थानीयले नगरपालिका प्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । मासु खानेमा एकै परिवारमा चार पाँच सम्म रहेको र आफुहरुलाई खोप लगाउन समेत पैसाको अभाव हुने अवस्था आएपछि उनीहरु चिन्तामा थिए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक १३, २०७८, १९:००:००
मुर्गियामा दुर्घटना : ७ जना घाइते शनिबार, कात्तिक १३, २०७८, १९:००:००
रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङमा सवारी दुर्घटना ,, तीन जनाको मृत्यु शनिबार, कात्तिक १३, २०७८, १९:००:००
कैलालीका बडुवाल हत्याका थप एक आरोपी पक्राउ शनिबार, कात्तिक १३, २०७८, १९:००:००
आज लाग्ने चन्द्र ग्रहण बार्नु नपर्ने शनिबार, कात्तिक १३, २०७८, १९:००:००